DAROOGADA "STROBE": SHARAXAAD KA MID AH FUNGICIDE IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA DAROOGADA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Macnaheed "Strobe" waa fungicide gaar ah fasalka. Waxay bixisaa dagaal wax ku ool ah oo ka dhan ah cudurrada fangas ee noocyada dhirta kala duwan, taas oo uu heley aqoonsi caalami ah.
Daroogada "Strobe": sharaxaad
"Strobe" waa daroogada jiil cusub, isticmaalka kuwaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay wakiilada keena cudurada fangas ee dhirta badan. Fungicide Tani waxay si firfircoon u saameeyaa fungi ee saameeya caleemaha, joojiyaa koritaanka mycelium iyo sporulation.
Waa muhiim! Xoogaaga ayaa xoojiya cudurrada ka dillaaca cudurka waxayna ka hortagaan xanuunka ka soo baxa Gagaashinka.
Iyada oo tayada tayada leh, qalabkani wuxuu ka caawiyaa in uu la qabsado cudurada ka soo baxa biqilka foosha. "Strobe" waxaa loola jeedaa noocyada strobilurins - walxaha ka hortaga nacaanka unugyada pathogen by saameeya enzymes kuwaas oo gaar u ah floral flungal ah.
Strobilurinsku waxay la qabsadaan fungus, xitaa tiro yar, sidaa daraadeed waxay gebi ahaanba halis ugu yihiin xayawaanka kale. Tani waa labadaba faa'iidada ugu weyn iyo faa'iidada ugu weyn ee walxahan. Xaqiiqdu waxay tahay in boqoshaada ay leeyihiin quudin wanaagsan oo ku salaysan isbeddellada, taas oo noqonaysa mid aan loo dulqaadan karin dhammaan daroogooyinka fasalka. Si loo gaaro waxtarka ugu wanaagsan ee isticmaalka "Strobe", fangasahani waa in loo isticmaalo marka loo eego qiyaasta saxda ah, markaa tilmaamaha isticmaalka waa inuusan ka xishoonin dareenkaaga.
Ma taqaanaa? Cilmi-baarayaasha ka soo jeeda Bartamaha John Inn ayaa soo helay borotiinka xakameynaya jihada koritaanka xididka dhulka hoostiisa. Waxaa la siiyey magaca RHD2. Waxay ku taallaa dhamaadka asalka waxayna kicisaa wax soo saarka xagjirnimada oo lacag la'aan ah oo xakameynaya nuugista kalsiyanka ka soo baxa ciidda. Kalsiyum laga helo geedka, mar kale waxay dhaqaajisaa borotiinka, xiritaanka wareegga.
Waxyaabaha firfircoon iyo habka waxqabadka daroogada
Waxyaabaha ugu firfircoon ee daroogada "Strobe", oo inta badan saameeya noolaha abuura, waa kresoxim-methyl Fungicide waxaa lagu soo saaraa qaab ah granules, kuwaas oo si fiican u milmi biyo. Marka la barbardhigo diyaargaroowga kale ee la midka ah, Strobe wuxuu gashaa dhismaha caleen laftiisa, waxaa lagu qaybiyaa gebi ahaan dibadda iyo gudaheeda, xitaa haddii hal dhinac oo ka mid ah saxanka caleen lagu shaqeynayo (geedka ayaa nuugaya qeyb yar oo ka mid ah walaxda firfircoon). Dareenka ugu macquulsan ee tufaaxa iyo geedaha pear waa cagaar weyn oo caleenta ah, taasina badanaa waxay muujinaysaa burburka buuxa ee qolofta. Saameyntani waxay horay u muuqatay ka dib markii seddex hab oo lagu buufinayey fungicide.
Waa muhiim! Daraasada sayniska ayaa muujisay in firileyda, ka dib markii lagu daaweeyo Strob, wax raad ah oo ka kooban Halabadan ayaa la helay. In tufaax, diiradeeda waa mid aan loo dulqaadan karin. Fungicide, u dhacaya ciidda, isla markiiba dhufto oo aan ku dhex mari karin qoto dheer, sidaa daraadeed ma nadiifiyo biyaha.
Sida loo isticmaalo daroogada, tilmaamaha isticmaalka?
"Strobe" waa fungicide balaadhan oo ballaadhan, tilmaamaha isticmaalka kuwaas oo aad u fududahay in la fahmo, iyo jawaabaha ka soo bixiyeyaasha iyo bannaanka, xaaladaha badankood, aad u xiisa badan.
Sidee loo codsadaa "Strobe" ubaxyada?
Ubaxyada beerta, beeralayda khibrad leh waxay ku buufinayaan fungicides si loola dagaallamo jilicida budada iyo miraha caleen. Xaaladdan oo kale, daroogada "Strobe" waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo xal, tilmaamaha isticmaalka kuwaas oo ah kuwan soo socda: kala-gooyaa 5 garaam oo fungicide ah baaldi biyo ah. Xalka dhibaatadu wuxuu hayaa waxtarka ugu sarreeya laba saacadood gudahood ka dib diyaarinta, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si haboon u isticmaasho inta lagu jiro wakhtigan. Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya waxay ka fiicnaaneysaa in lagu dhajiyo ubax adigoo isticmaalaya falejo, adigoo daaweynaya xabbad saddex jeer ah bishii.
Waa muhiim! Marka korayo-aadanku, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo ma aha oo kaliya caleemaha, laakiin sidoo kale ciidda u dhow duurka.
Goobaha beerta waxay u baahan yihiin in la mariyo laba jeer bishii, laga bilaabo bartamihii xagaaga (qiyaastii laga bilaabo Julaay 1) iyo illaa iyo waqtiga xiga hoyga dhirta xilliga jiilaalka. Daaweynta ubaxyada fangaska, "Strobe" waxaa loo isticmaalaa oo kaliya qayb ka mid ah daaweyn dhamaystiran. Ka hor intaan la isticmaalin daroogadaas kadibna waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo fungicides, habka ficilka ee ka duwan yahay strobilurins. Sannadka soo socda, Strobe iyo diyaargaroow isku mid ah ayaa si adag loo mamnuucayaa isticmaalka.
Isticmaalka daroogada beerta
Daroogada "Strobe" waxay u badan tahay fungicide-ka ugu wanaagsan ee dhirta beerta, iyo canab si gaar ah. Waxay si wax ku ool ah uga hortagtaa dhalmo ee cudurada fangasyada soo muuqda on miraha iyo caleemaha dhirta. Xitaa haddii xaqiiqda uu cudurku ku jiro fungus, fangaska Strob-ku wuxuu si wax ku ool ah u daaweynayaa shay cudur ah, ka dibna wuxuu ka tirtiraa cudurka isaga oo xakameynaya sporulation iyo kobaca mycelium. Sababo xaqiiqda ah in gawaarida cusub aysan sii wadi Karin, waxaa suurtogal ah in laga hortago in cudurku soo ifbaxay. Haddii dhirta uu cudurku ku dhacay markii ugu horreysay, markaas Strobe wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay saameynta difaaca mustaqbalka ee fayrasyada.
Dawadani waxay ka caawisaa sidii ay ula qabsan lahayd dhibic madow, xayrta maqaarka, kansarka roodhida hoose, xajin iyo xayawaan. Daroogada "Strobe" waxaa loo isticmaali karaa canab si loogu isticmaalo ujeedooyin ka hortag ah, inkastoo xaqiiqda ah in tilmaamaha isticmaalka uu ka yiraahdo suurtogalnimada in lagu buufiyo oo keliya xilliga koritaanka. Daaweyntu waxay saameysaa caleemaha, miraha, asliga ah iyo ciidda aagga asalka ah. Canab waa in la buufiyaa laba jeer 10 maalmood. Daaweynta ugu dambeysa waxaa la sameeyaa bil ka hor goosashada.
Dhirta miraha kale waa in lagu daaweeyaa Fungicide Strobe inta lagu jiro xilliga sii kordhaya (ilaa saddex jeer inta lagu jiro xilliga oo dhan). Kala shaqeynta waxaa la sameeyaa laba toddobaad gudahood. "Strobe" waa in loo bedelaa walxaha kale ee fungicidal: "Skor", "Cumulus DF", "Bordeaux isku dar". Hawlaha ugu dambeeya ee geedo midho leh waxaa la sameeyaa aan ka horeyn 35 maalmood ka hor goosashada.
Ma taqaanaa? Warshadaka Paris Japonica wuxuu leeyahay codeka ugu dheer ee hiddaha oo dhan ee lagu yaqaanay meeraha. Gowrka wuxuu ka kooban yahay 149 000 000 000 laba nucleotides pairs! Waa 50 jeer jinsiga aadanaha! Haddii aad lakulmid dhammaan silsiladda DNA ee xariiq toosan, markaas cirku wuxuu noqon doonaa 90 mitir dheer!
Tilmaamaha loo isticmaalo "Strobe" ee dalagyada khudradda
Dalagyada qudaarta, oo la mid ah geedo waaweyn oo geedo ah, ayaa la baaraandegaa inta lagu jiro xilli sii kordhaya. Xaaladaha ugu habboon ee hawsha - cimilada qaboobaha qallalan.
Codsashada "Strobe" sidii fungicide for dalagyada khudradda, xusuusnow in tilmaamaha, gaar ahaan, yaanyada, basbaaska, dabacasaha iyo dalagyada kale ayaa guud ahaan isku mid ah. Daroogadaasi waxay si wax ku ool ah ula socotaa gariir goor dambe ah iyo xayrta yaryar ee yaanyada iyo dabacasaha, qajaarka peronosporus iyo cudurrada kale.
Dhirta khudaarta cagaaran waxaa lagu daaweeyaa buufinta, laakiin adeegsiga "Strobe" waa mid si fiican u dhafan "Quadris" ama "Abiga-Peak". Miisaanka wareegga waa sida soo socota: marka hore, buufinta waxaa lagu sameeyaa "Strobe", ka dibna fungicide kale, ka dibna mar labaad "Strobe". Sannadka soo socda, halkii laga samayn lahaa geedaha khudradda laga shaqeynayo, waxaa lagu talinayaa in lagu beero kuwa kale.
Khudaarta waa in la buufin karaa laba jeer inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, iyo waqtiga sugitaanka, laga bilaabo wakhtigii ugu dambeeyey ee soo go'itaanka beergooyska, waxay kuxirantahay dalag gaar ah:
for yaanyada iyo qajaarka koray beerta furan - tani waa 10 maalmood.
for yaanyada gudaha - 5 maalmood.
for qajaarka ee dhulka xiran - 2 maalmood.
Waa muhiim! Fungicide "Strobe" waa mid aad u sun ah, sidaa darteed markaad la shaqeyneyso waa inaad raacdaa taxaddarrada badbaadada ee lagu sharaxay tilmaamaha.
U hubso inaad xirto gacno gashi, oogada iyo dharka, ka dibna waa in la beddelo oo la dhaqaa si fiican. (waa horey loo qooyay soodhada-saabuun). Haddii "Strobe" uu ku dhaco indhaha ama maqaarka, meelaha biyo ah ku biyo raaci. Haddii fangasku uu jidhka u galo, waa in aad dhaqdaa caloosha, ka dibna biyo raaci oo wac dhakhaatiirta. Dhammaan xayawaannada kale ee dhirta leh waxaa la samayn karaa saddex maalmood oo keliya daaweynta ka dib.
"Strobe": faa'iidooyinka isticmaalka fungicide
Faa'iidooyinka isticmaalka fangasoofka Strobi waa sida soo socota:
Waxaa si siman loo qaybiyaa dusha sare ee caleemaha.
Waxay ku dhacdaa epithelium caleen xitaa ka dib marka la dhinac dhigo hal dhinac.
Iskawirid roobab culus.
Dib-u-dhigga isbeddelka heerkulka.
Waxay leedahay codsiyo badan oo ballaaran.
Waxaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro ubax.
Waxay leedahay heer aad u hoos u ah sunta xayawaanka.
Ma taqaanaa? Seychelles Fan Palm - sheyada gaarka ah ee jawiga dhirta. Waxay leedahay miraha ugu weyn adduunka: hal abuur ayaa miisaankiisu ku dhowaad 20 kg oo uu ku kaco 10 sano.